Desktọpụ teepu - Record Desktọpụ ihuenyo dị ka Video
> Resource> Record> Weghara n'akụkụ ọ bụla nke gị na Desktọpụ ihuenyo
Ezipụta na ndekọ ebe na ihuenyo bụ improtant maka gị na desktọọpụ ndekọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ mpaghara ọ bụla dị ka amasị gị, DemoCreator bụ ihe dị gị mkpa. Ebe a ka na-anya na otú idekọ dị iche iche ebe nke desktọọpụ na nke a software.
Mgbe ị lauch DemoCreator na pịa Record button, ị ga-ahụ na nke a na desktọọpụ ndekọ software enye mgbanwe ebe kpọọ nhọrọ, mgbe ahụ ị na-enwe ike idekọ desktọpụ gị ihuenyo dị ka ị na-amasị:
Ngwa - Record omume na a họrọ ngwa window
Omenala Size - Record omume n'ime a kpọmkwem ebe na ihuenyo
Full ihuenyo - Record omume na dum desktọọpụ
Record desktọọpụ ngwa window
Ọ bụrụ na ndị na-agba ọsọ software ị chọrọ ka ịdekọ bụ na a ụfọdụ window na e nwere ndị ole na ole dialog igbe ma ọ bụ mmapụta gbasie na-egosi si na window, na-ahọpụta Ngwa nhọrọ dị mma. Na-ewere na ihuenyo ogbugba ndekọ mode, dialog igbe na Pop-acha ọkụ ga na-egosipụta na gị na ndekọ ma ọ bụrụ na ha nọ na ndekọ window. Ihe ọ bụla nke gbatịrị n'èzí nke ókè nke ala window ga-ebipụ. Ọ bụrụ na ị na-eji zuru ngagharị ndekọ mode, i nwere ike enyere ndị na akpaaka pan atụmatụ idekọ ebe n'èzí mbụ ebe gị cursor na-aga. Gbalịa na-agba ọsọ gị na ngwa ịhụ ka ọ ga-OK ime ka ngwa window dị ka ndekọ ebe. Ọzọkwa, buru n'uche na ndabara size nke ekwusara nkiri ga-adị ka otu ihe ahụ dị gị ngwa window ndabara. Iji mee ka ọ na-egwu na a nta ọkpụkpọ na ezi video àgwà, ọ na-atụ aro iji weghachi ala ngwa window ma na-eme gị ndekọ. Ma ọ bụ i nwere ike ịgbanwe mmepụta akụkụ na-ekwusara dialog igbe. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike ịgbakwunye mbugharị akpọkwa ka ibubaa mesie nkọwa maka resized slides.
Bugharịa ihe green rektangulu na ngwa na ị chọrọ ka ịdekọ, na snap na ya, mgbe ahụ, i nwere ike na-amalite gị ndekọ.
Record desktọọpụ ihuenyo na omenala size
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ desktọọpụ eme naanị-eme na a kpọmkwem ebe, ị nwere ike hazie ndekọ ebe tupu n'aka. Ime ihe ọ bụla dị ka òké ije na keystroke na na ebe a ga-weghaara. Eme ụfọdụ ndekọ mmeghari iji jide n'aka na ị na-ihe niile ị chọrọ igosi na-eme n'ime na mpaghara. Site ịlele na atụmatụ nke Auto Pan na zuru ngagharị ndekọ ntọala, ndekọ ebe ga-eso gị òké ije ịgagharị ihuenyo si n'akụkụ na-n'akụkụ ma ọ bụ elu na ala mgbe retaining otu size.
Pịa compass na akara ngosi na etiti nke pụta ìhè ndekọ ebe na ịdọrọ ya ka a ọhụrụ ọnọdụ na desktọọpụ.
Pịa na ịdọrọ a ahụ na a nkuku ụlọ ma ọ a n'akụkụ nke ndekọ ebe ka ịhazie ndekọ ebe.
Tinye nọmba nke obosara na ịdị elu, na ị nwere ike ịgbanwe ndekọ ebe. Mgbe e ji na mkpọchi akụkụ ruru nhọrọ, ị nwere ike resize gị ndekọ na mpaghara na-kwesịrị ekwesị akụkụ ruru nọgidere na-enwe.
Record zuru desktọọpụ ihuenyo
A nhọrọ bụ ka i wee weghara ihe niile na-eme gị dum na ihuenyo. Tụlee na ndekọ nke nanị otu akụkụ nke desktọọpụ, ọ ga-ewe elu karịa na kọmputa akụ na ike a ibu faịlụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e a n'ezie elu mkpebi ileba anya maka ihuenyo zuru ndekọ, eleghị anya ị na-achọghị ka ike a video faịlụ na nwere na-egwuri azụ na otu mkpebi na a n'ezie nnukwu ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na o kwere omume, belata gị na ihuenyo mkpebi tupu ị malite idekọ gị na desktọọpụ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eji ihuenyo mkpebi nke 1026 * 768 ma ọ bụ karịa, i nwere ike ịgbanwe mkpebi na-800 * 600 na i ndekọ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-egosi na a nta ọkpụkpọ dị ka 640 * 480, ị nwere ike resize nkiri akụkụ dị ka 80% ma ọ bụ 60% nke mbụ otu. Ya mere ị pụrụ-ebipụta video nke a nta akụkụ, ma ọ pụrụ ịbụ a obere blurring. Otú ọ dị, i nwere ike ịgbakwunye mbugharị mmetụta ito ndị dị mkpa n'ógbè gị dere desktọọpụ na-egosi ụfọdụ nkọwa.
Mma gị na kọmputa ịrụ ọrụ n'oge ihuenyo-kpọọ nnọkọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ weghara dum na kọmputa, na-ebelata ihuenyo mkpebi (atụ, i nwere ike belata gị na ihuenyo mkpebi si 1024 site 768 800 site 600) na agba àgwà a ezi echiche. Ị nwere ike ịtọ gị na kọmputa ngosi Njirimara dị ka ndị na-esonụ screencast:
Mgbe na-amụta otú idekọ dị iche iche ebe nke desktọọpụ, ibudata a ihuenyo edekọ na-amalite na ị desktọọpụ ndekọ ugbu a!